Lutris: Onye ahia egwuregwu ohuru ma dikwa nma maka GNU / Linux | Site na Linux
Dị ka anyị hụrụ n'akwụkwọ abụọ na-adịbeghị anya, otu na GameHub na onye ozo banyere Itch.io, onyinye nke ngwọta (ndị ahịa / nyiwe) maka egwuregwu na GNU / Linux ọ na-eto ma na-esikwa ike. Na kpara Lutris enwere, n'ọsọ ime GNU / Linux magburu onwe Usoro njikwa n'ihi na fans nke egwuregwu vidio.
Lutris, dị ka ndị ọzọ ndị na-egwu egwuregwu maka GNU / Linux, na-enye mfe nnweta a katalọgụ nke na-eto eto nke egwuregwu vidiosite na ochie, online, ma ọ bụ ochie na desktọọpụ desktọọpụ nke oge a, dị mfe ma ọ bụ ọtụtụ. Na nke ahụ, n'ime ya ngalaba ugbu a (0.5.X) -enye gị ohere comfortably na-agba ọsọ ọ bụla egwuregwu na otu interface na iwekota ọzọ na-echekwa dị ka Gọg y Steam, iji mbubata gị ẹdude egwuregwu n'ọbá akwụkwọ na ẹdude achọrọ echichi n'ihendesịta.
Dị ka akọwara, n'ụzọ dị mfe na a gara aga banyere Lutris, kwuru na ngwa bụ:
"Ngwurugwu egwuregwu na-emeghe maka Linux mepụtara na Python 3, nke na-enye anyị ohere ịwụnye ma jikwaa egwuregwu Linux dakọtara na ụzọ dị mfe na site na gburugburu ebe dị n'otu. Ngwaọrụ a na-enye nkwado maka egwuregwu Linux nke ọma yana Windows emulators na egwuregwu enwere ike iji mmanya na-agba ọsọ. N'otu ụzọ ahụ, ọ nwere nkwado sara mbara maka PlayStation, egwuregwu Xbox, n'etiti ndị ọzọ.".
Ma, Lutris ọ dịghị mfe Desktop ahịa maka egwuregwu, ma nwekwara a ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke na-eme ka a ụlọ ahịa (ahịa) nke ngwa yana / ma ọ bụ egwuregwu, nke syncs na ngwa desktọọpụ ahịa, ka kwe, kwado ma mee ngwa ngwa, nhazi na ntinye nke egwuregwu Nke otu. Nnọọ n'ụdị nke Steam.
1.1 Gịnị bụ Lutris?
1.2 Njirimara nyiwe
1.3 Nwụnye ntinye
1.3.1 Ntinye site na ọnụ
1.3.2 Ndebanye aha akaụntụ n'ịntanetị
1.3.3 Ojiji nke Lutris
1.3.4 Wụnye egwuregwu
1.3.5 Na-agba ọsọ egwuregwu arụnyere
Gịnị bụ Lutris?
Lutris bụ a desktọọpụ ahịa na gaminggba Cha Cha n'elu ikpo okwu maka oghe emeghe na GNU / Linux, nke na-eme ka ọrụ nke igwu egwu site na nchịkwa, ntinye na nhazi kachasị mma nke egwuregwu ahụ.
Lutris anaghị ere egwuregwu. Na-enye ohere ịnweta egwuregwu efu, emeghe na n'efu. Maka egwuregwu egwuregwu, ị ga-enyerịrị akwụkwọ iji wụnye egwuregwu a Lutris. Na mgbakwunye, ikpo okwu na-eji mmemme akpọrọ "Ndị ọgba ọsọ" Iji malite egwuregwu, A na-enye ndị na-ere ahịa a (ma e wezụga Steam na ihe nchọgharị weebụ) Lutris, yabụ na ịchọghị itinye ha na njikwa ngwugwu gị.
Akụrụngwa nke Lutris na-akpaghị aka n'ụzọ zuru ezu site na ederede, nke enwere ike ide na JSON ma ọ bụ YAML. Enwere ike ịmepụta akụkọ nhọrọ ukara website ma jikọta ha na ndị ahịa nke Lutris. Nke a na-enye onye ahịa gị ohere imekọrịta ọbá akwụkwọ ọchụchọ nke ibe weebụ. Ugbu a ọ ga-ekwe omume mekọrịta akaụntụ (ọba akwụkwọ) nke Steam ya n'ọbá akwụkwọ nke Lutris.
Onye ahia nke Lutris ọ na-echekwa ihe akaebe mgbe ị jikọọ na weebụsaịtị, na anaghị echekwa nzere nbanye gị. Iji ederede, ị nwere ike igwu egwuregwu ndị ahụ na-enweghị mkpa maka ịtọ ntọala. N'ikpeazụ, Ndi obodo ka Lutris ji 100% akwado, iji hụ na mmepe na-aga n'ihu nke ọrụ ahụ, yabụ mepee iji nye onyinye ma ọ bụ site na Ihe ngosi Patreon.
Na download ngalaba nke ukara website de Lutris, ị pụrụ ịhụ n'ụzọ doro anya dị iche iche echichi ụzọ dị iche iche GNU / Linux Distros. N'okwu anyị, dị ka ọ dị na mbụ a ga-egosi nwụnye MXLinux 19.1 (DEBIAN 10.3).
N'okpuru ebe a Lutris nwụnye na iji usoro:
Ntinye site na ọnụ
Ndebanye aha akaụntụ n'ịntanetị
Ojiji nke Lutris
Na-agba ọsọ egwuregwu arụnyere
Dị ka ị pụrụ ịhụ, nwụnye na ojiji nke Lutris Ọ dị mfe, na katalọgụ nke egwuregwu efu, oghe na n'efu abụghị naanị nnukwu kamakwa ọ na-eto eto n'ihi nnukwu nkwado nke ndị mmepe egwuregwu vidiyo na ndị «Comunidad de Software Libre y Código Abierto». Na maka ozi ndị ọzọ gbasara Lutris ya ukara saịtị nwere ike inweta na GitHub.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Lutris a rụzigharịa na magburu onwe ya «Cliente para juegos» gbasara nke anyi Free na Mepee Sistemụ, nke nwekwara ebe nrụọrụ weebụ magburu onwe ya na nnukwu egwuregwu dịnụ, bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Lutris: Onye ahia ohuru ma dikwa nma maka GNU / Linux
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ kwadoro mmemme
Ee, ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya.
Versiondị ọhụrụ nke Go 1.14 dị ebe a na ndị a bụ akụkọ ya